Wutyee Gourmet Foods ဟင်းချက်နည်း အမျိုး (၁၀၀) စာအုပ်သစ် | Wutyee Food House
– ဟင်းချက်စာအုပ်အဖြစ် သိမ်းထားချင်တယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေကို ဟင်းချက်စာအုပ် ကောင်းကောင်းလေး လက်ဆောင် ပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ”Wutyee Gourmet Foods ဟင်းချက်နည်း အမျိုး (၁၀၀) စာအုပ်” ကိုအားပေးကြပါနော်… <3
ဈေးနှုန်း – ၅၀၀၀ ကျပ်
ဟင်းချက်နည်း – ၁၀၀မျိုး
စာမျက်နှာ – ၁၃၂
၀ယ်ယူနိုင်သည့် နေရာ – စာအုပ်ဆိုင်တိုင်း၊ City Mart၊ Ocean Supermarket၊ Capital၊ Better Day Media Publication
Wutyee Gourmet Foods ဟင်းချက် အစီအစဉ်သည် Skynet MNTV ရုပ်သံလိုင်းတွင် အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၅ခုနှစ် မှစပြီ ပြသခဲ့ရာ ခုဆိုရင် ၁နှစ်ပြည့်သွားပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် Wutyee Gourmet Foods ဟင်းချက်အစီအစဉ်တွင် ပြသခဲ့ပြီသော ဟင်းချက်နည်းများကို စုစည်းကာ Wutyee Gourmet ဟင်းချက်စာအုပ်အား မချိုဝတ်ရည်၏ စတုတ္တမြှောက် စာအုပ်အဖြစ် ထုတ်လုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Wutyee Gourmet Foods ဟင်းချက် စာအုပ်တွင် ‘ကြက်သား/ဘဲသားဟင်းလျာ ချက်နည်းများ’၊ ‘၀က်သားဟင်းလျာ ချက်နည်းများ’၊ ‘ပင်လယ်စာ ဟင်းလျာ ချက်နည်းများ’၊ ‘အမဲ/ဆတ်သား ဟင်းလျာ ချက်နည်းများ’၊ ‘ထမင်းချက်နည်းများ’၊ ‘ခေါက်ဆွဲ/ပါစတာ ချက်နည်း’များ အပြင် ‘အဆာပြေချက်နည်း’ ပေါင်း အမျိုး(၁၀၀) ပါဝင်တာလည်း ဖြစ်ပါသည်။
ချက်နည်းများအပြင် ချက်ပုံအဆင့်ဆင့်ကိုလည်း ပုံများနှင့်တကွ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အရသာရှိသော ဟင်းလျာများကို ချက်ပြုတ်ရင်း ပျော်ရွှင်ချမ်းမြှေ့ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါရစေ။
သက်သတ်လွတ် ဟင်းလျာများသီးသန့် စာအုပ်တအုပ်လောက်ထုတ်စေလိုပါသည်။ အသားမစားသော သူများအနေနဲ့ ပိုမိုပြည့်စုံအဟာရဖြစ်စေမည့် ဟင်းလျာများချက်ပြုတ်နည်းကိုပါဖြည့်စွက်ထုတ်ဝေ လျှင်ပိုမိုပြည့်စုံပါလိမ့်မည်
Ma Aye Mu says:
Thank you wut yee foranew book publication. I will try to get from the places you mentioned. Take care, and wish you more successful life!
Ma Aye Mu
အမ အချိန် ၂ ပတ်ရလို့ ဟင်းချက်သင်တန်းတက်ချင်ပါတယ် ဆက်သွယ်ပေးပါ ဖုန်း၉၉၅၅၅၂၁၉၆၄